Arsenal oo war farxad leh heshay kahor kulanka caawa ay booqanayso Southampton – Gool FM
Arsenal oo war farxad leh heshay kahor kulanka caawa ay booqanayso Southampton
Haaruun June 25, 2020
(London) 24 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo dhowaanahan la tacaaleysay dhibaatooyin guuldarrooyin iyo dhaawacyo isugu jira ayaa hadda heleysa akhbaar farxad leh kaddib markii ay tababarka ku soo laabteen xiddigaha khadka dhexe ka ciyaara ee Granit Xhaka iyo Lucas Torreira.
Labadan laacib ayaa dhaawacyo isku mid ah ka qabay anqowga, balse waxay ka soo hormareen xilligii la filayay inay soo laaban karaan, taasoo dhiirro galineysa rajada ah inay ku soo laabtaan waddada guulaha kaddib markii ay labo guuldarro oo xiriir ah ay soo gaareen tan iyo markii ay kubadda cagta ka soo laabatay xannibaaddii coronavirus.
Torreira ayaa seegay kulankii ay Manchester City kala kulmeen guuldarradii 3-0 ahayd iyo ciyaartii ay ku hor jabeen kooxda Brighton, halka Xhaka dhaawac loogaga saaray daqiiqadihii ugu horreeyay ee kulankii Etihad ka dhacay, se waxaa la rajeynayaa inay caawa ka qayb qaataan kulanka ay Arsenal safarka tahay.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Macallin Mikel Arteta ayaanan heli doonin xiddigaha kala ah Pablo Mari, Calum Chambers, Sokratis iyo Cedric Soares kuwaasoo dhammaantood dhaawacyo qaba.
Gunners ayaa dooneysa inay caawa guul ka soo gaaraan naadiga Southampton ka soo adkaato kulanka ay booqanayaan garoonka St Mary’s si ay usoo noolleysiiyaan rajadooda ka qayb galka tartammada Yurub.
Sergio Ramos oo jawaab kulul siiyay Gerard Pique
Waqtiga ay Barcelona iyo Juventus dhammeystirayaan heshiiska is dhaafsiga ee Arthur & Pjanic oo la shaaciyay